Cudurka Coronavirus ayaa kusii faafaya Mareykanka, ayada oo Khamiistii laga helay afar gobol oo hor leh iyo magaalada San Francisco.
Tirada dhimashada ayaa sidoo kale gaartay 12 qof, ayada oo qofkii ugu dambeeyey uu ku dhintay deegaanka King County ee gobolka Washington, halkaasi oo lix qof ay horey ugu dhinteen.
Ugu yaraan 57 kiis oo cusub oo cudurka ah ayaa Khamiistii laga xaqiijiyey guud ahaan Mareykanka, wuxuuna faafitaanka gaaray gobollada Colorado, Maryland, Tennessee iyo Texas, iyo magaalada San Fransisco.
Gobollada Texas iyo Maryland ayaa mid walba wuxuu xaqiijiyey saddex kiis oo la xiriira cudurka Coronavirus, halka Tennessee iyo Colorado laga helay hal kiis midkiiba.
Tirada guud ee gobollada Mareykanka ee cudurka laga xaqiijiyey ayaa hadda ah 17 gobol.
Dhowr ka mid ah dadka cusub ee cudurka uu haleelay ayaa lagu warramayaa inay xaaladdooda aad u daran tahay.
20 kiis oo cusub oo cudurka ah ayaa laga helay degaanka King County, oo ay ka tirtsan tahay magaalada Seattle, taasi oo tirada guud ee halkaas gaarsiisay 51 qof, halka dhimashaduna ay mareyso 11 qof.
Si la mid ah dalal badan oo caalamka ka mid ah, Mareykanka ayaa wajahaya xaqiiqda cudurkan ayada oo dadka la weydiistay inay guryahooda joogaan oo aysan shaqooyinka iman, iskuullada ayaa la xiray, waxaana sidoo kale la joojiyey isu-imaatinka dadka ayada oo la baajiyey dhacdooyinka cayaaraha.
In ka badan 3,200 oo qof ayaa cudurkan ugu dhintay caalamka oo dhan.